Isalfure Abavelisi abaMnyama-China iSulphur abamnyama abaXhasi, abaFektri
Isalfure emnyama ulwelo lwe-BR
Inkangeleko eqaqambileyo emnyama emnyama okanye iinkozo. Ingenakunyibilika emanzini nakutywala. Isinyibilikisi isisombululo sesodium sulfide njengombala oluhlaza-mnyama. Izinto ezi-Indices Shade Zifana namandla oMgangatho angama-200 Ukufuma,% -6.0 Imicimbi enganyibilikiyo kwisisombululo se-sodium sulfide,% -0.3 Usetyenziso olusetyenziselwa ikakhulu ukudaya kwikotoni, i-viscose, i-vinylon kunye nephepha. Ukugcinwa kufuneka kugcinwe kwindawo eyomileyo kunye nomoya. Khusela elangeni, ukufuma kunye nobushushu. Ukupakisha iingxowa zeFiber ngaphakathi ngaphakathi kunye neplasti ...
Umnyama ngowona mthi uphezulu wevolthi edayiweyo kwikotoni kunye nakwimpahla yempahla eyenziwayo enamaxesha onke okufuna ikakhulu ukunxiba okungaqhelekanga (iidenim kunye neempahla). Kuzo zonke iiklasi zeedyestuffs, iSulphur emnyama iklasi ebalulekileyo yedayi yokuhombisa umbala weeselulosics, ibikho phantse ikhulu leminyaka.
Iimpawu ezintle zokukhawuleza, ukusebenza kweendleko kunye nokwenza lula kokusebenza phantsi kweemeko ezahlukeneyo zokulungisa, ukuqhubeka okuqhubekayo kunye nokuqhubekayo kuyenze ibe yenye yezona zinto zidume kakhulu. Ngaphaya koko, ukhetho olubanzi lokukhetha iintlobo ezahlukeneyo eziqhelekileyo, i-leuco kunye nefom solubilized yeyona nto iphambili inegalelo kubukho obuqhubekayo kunye nemfuno esoloko isanda yeli klasi le-dyestuff.
Idayi engamanzi ziifom ezifanelekileyo zokuhambisa umbala kwisicelo sakho. Oku kuphelisa ukudaya uthuli okanye ukubeka ilifu ngelixa kusenziwa imveliso yakho, kunye nokuba lula kwaye kukhuselekile ukusebenza. Ezi dyayi azithathi xesha okanye mizamo yokufumana amalaphu ombala opheleleyo ombala opheleleyo.